6 amanoveli okuqala obugebengu wango-2018 | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama
Izinsuku ezimbalwa nje zokuphela konyaka, konke ukuthula nothando kula maholide kanye nenjabulo ecatshangelwayo. Noma cha. Ngakho-ke ngiza ngaphambi kwami ezincwadini zokuqala ezintsha kuhlobo lwezithandwa zami, mnyama omnyama kakhulu. Ngokuphambene namalambu nobumnandi bama-polvorones ne-marzipan. Hambani 6 yalezi ziqu zokuqala nezamazwe omhlaba ezishicilelwa manje ngoJanuwari. Kusuka encwadini yokugcina ochungechungeni ngusosayensi wezengqondo waseSweden uSebastian Bergman noma lokho kuthunyelwa okusayinwe nguchwepheshe wezokwesaba kwengqondo okungesinye iSebastian, iBerliner Fiztek.
1 Isilonda - uJorge Fernández Díaz
2 Ukufa akuyona into ebuhlungu kakhulu - u-Inés Plana
3 Ukuthumela - Sebastian Fiztek
4 Iqiniso le-Alligator - Massimo Carlotto
5 Ukujeziswa okulungile - uHorjth noRosenfeldt
6 Usuku lwalahleka uthando - uJavier Castillo
Inxeba - UJorge Fernández Díaz
Ekupheleni kukaJanuwari inoveli entsha yalo mbhali nentatheli ishicilelwe, iletha i- Isikhumbuzi Somenzeli, uhlamvu oluyimpikiswano Inkemba.
Indela iyanyamalala ishiye umyalezo oyindida. Umhleli kaPapa Francis uyalela ama-intelligence agents amabili ukuthi amfune noma kuphi. Ngaso leso sikhathi, umeluleki wezepolitiki oxoshwe nguhulumeni wase-Argentina Uqashwe ngumbusi wendawo ePatagonia ukuze athuthukise isithunzi sakhe futhi agweme inhlekelele yokhetho. Kepha uzoba nosizo lukaRemil baze bahlangane bobabili Ubugebengu bombuso nenhlangano embi.
Kubhekwe ku-I-hriller yezepolitiki enenhlanganisela yenoveli yobugebengu, kuyo izindaba ezine zothando eziyimfihlakalo ziyahlangana ngobulukhuni bophenyo nangesigqi esikhulu se-cinematographic.
Ukufa akuyona into ebuhlungu kakhulu - Ines Plana
Okunye Yakha isakhiwo esivusa amadlingozi esinabalingiswa abahle nokuxoxa izindaba okumanzi. Usitshela udaba lowesilisa obonakala elenga ehlathini likaphayini emaphethelweni eMadrid, ekhishwe amehlo. Kwelinye lamaphakethe akhe bathola iphepha elinegama nekheli lowesifazane: USara Azcarraga, ohlala amakhilomitha ambalwa ukusuka lapho kwenzeke khona leli cala. Ukhululekile, unesizungu, uphuza i-vodka enesizungu, uSara ubuthakathaka, unesizungu futhi uyaphuza futhi ugwema ukuxhumana nabantu.
UJulián Tresser, uLieutenant we-Civil Guard, uphethe leli cala, esizwa yikhophi osemncane UChur, obhekene nophenyo lobugebengu okokuqala ngqa, engenankomba. Tresser izothola amanye amaqiniso azonikeza ukugumbuqelwa okubuhlungu ekubeni khona kwayo futhi bazoyimaka kuze kube phakade.
Impahla - USebastian Fiztek
Okusha Thriller kusuka kumbhali ophumelele waseJalimane we I-Terapia, Umgibeli 23 y Iphrojekthi kaJoshua. Lesi sikhathi sitshela udokotela wezifo zengqondo osemncane U-Emma stein, ongasaphumi kwakhe selokhu adlwengulwa esehhotela. Ukube bekuyi- isisulu sesithathu se-psychopath yombulali futhi nguyena kuphela owasinda ephila, yize engabubonanga ubuso bakhe. Ngelinye ilanga ekuseni umposi umshiyela iphasela elilenzelwe umakhelwane wakhe, angamazi. Futhi ngokwamukela, akacabangi ukuthi iphupho lakhe elibi kakhulu selizoqala.
Iqiniso le-Alligator - UMassimo Carlotto
Le yi isihloko sokuqala ochungechungeni oludlala nomphenyi wangasese oteketiswa ngegama elithi uCayman futhi sincike empilweni yangempela yombhali.
e 1976 U-Alberto Magagnin ulahlwe yicala lokubulala u-Evelina Bianchini. Ngo-1993, ngenkathi esashwele, uMagagnin wanyamalala. Ngakho-ke ummeli wakho, UBarbara Foscarini, unquma ukuphendukela kumphenyi wangasese, okunguye UMarco Buratti, ingwenya. Ungumthandi we blues, Ophuza iCalvados nowake wagwetshwa ngenxa yokulahlwa yicala okwakungafanele.
Ehamba nomlingani wakhe ongenakuhlukaniswa, owashushumbisa uBeniamino Rossini, uCayman uqala uphenyo oluzomholela ekutheni angene ngaphakathi nangaphandle kwecala elidonsa isikhathi eside. UMagagnin wayengenaso isizathu sokubulala, kodwa iphrofayili yakhe yamenza waba imbuzi ephelele.
Ukujeziswa okulungile - IHorjth neRosenfeldt
El isihloko sesihlanu yalolu chungechunge oluhlonishwayo olulingisa i- Isazi sokusebenza kwengqondo saseSweden uSebastian Bergman ubona ukukhanya maphakathi noJanuwari. Usitshela icala le- a Isihlabani sethelevishini sitholakale sibulewe ngokudutshulwa ekhanda esikoleni esilahliwe. Umzimba wakhe ubheke odongeni futhi uboshelwe esihlalweni kukhona amanye ama-exam sheet.
Lokhu kubulala kungokokuqala ochungechungeni oluzoba nabantu abadumile njengezisulu. ITorkel Hölgrund Crime Squad Bazosingatha leli cala futhi, njengenjwayelo, bazosizwa ngobungoti nolwazi lukaSebastian Bergman. Bazokwazi ukulandela izinkomba ezitholakala ku- izingxoxo ze-inthanethi nangezincwadi ezingaziwa eshicilelwe emaphephandabeni ukuxazulula le mpicabadala.
Usuku okwalahleka ngalo uthando - UJavier Castillo
UJavier Castillo ubengumbhali wezindaba ezimfushane kusukela ebusheni. Inoveli yakhe yokuqala eyaba yimpumelelo kwezentengiso kwi-inthanethi yabizwa ngesihloko esithi Usuku okwalahleka ngalo ingqondo. Manje usethula lokhu, enye indaba elayishwe ukungabaza nothando ngokulinganayo, ethembisa ukuba yimpumelelo entsha.
Ngehora leshumi nambili ekuseni ngoDisemba 14 intombazanyana egcwele imihuzuko Uvela enqunu esikhungweni se-FBI eNew York ephethe amanothi ambalwa aphuzi esandleni sakhe. Umhloli Bowring, ophethe uphiko lweCriminology, uzozama ukuthola ukuthi yini efihliwe yile ntokazi nokuxhumeka kwayo kwelinye icala, lokho kowesifazane onqunywe ikhanda ngemuva kwamahora futhi ogama lakhe lifana nalelo elibhalwe kwelinye lamanothi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Izincwadi ezintsha eziyi-6 zobugebengu zango-2018